Imithambo emi-5 yokunyakaza yokunyusa ukuhamba kwabo bane-Fibromyalgia
Ukuziqhelanisa neentshukumo ezi-5 kwabo bane-Fibromyalgia
14 / 02 / 2019 /0 Amazwana/i udinwe, Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca, rheumatism/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo esiqaqanjelwa sisifo esaziwa ngokuqina kunye nentlungu kwimisipha kunye namalungu. Nazi iindlela ezintlanu zokuzilolonga (kubandakanya iVidiyo) kwabo bane-fibromyalgia enokuthi ibonelele ngokuhamba okungcono ngasemva nasentanyeni.
ICEBISO: Skrolela ezantsi ukuze ubukele ividiyo yokuzivocavoca ngokuziqhelanisa nokunyakaza okwenzelwe wena nge-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia ibangela iintlungu ezingapheliyo kwezihlunu, izicubu ezinxibelelanayo kunye nokudibana komzimba. Ukuchongwa kwentlungu engapheliyo kuchazwa njengokuchaphazeleka kwezithako kwaye kunika umntu ochaphazelekayo iziqephu zentlungu eqatha, ukungasebenzi kakuhle, ukudinwa, enkungwini ubuchopho (fibrotic fog) kunye neengxaki zokulala.
Ukuphila ngeentlungu ezinganyangekiyo kwenza ukuba kube nzima ukuzilolonga nzima -Kwaye ngenxa yoko ubomi bemihla ngemihla bunokubonakaliswa ngokuhamba kancinci. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kangaka ukwazi malunga nokuhamba kwemithambo enje ngale iboniswe kwividiyo engezantsi nakweli nqaku. Siyathemba ukuba banokukunceda ngokuhamba kwakho ngasemva.
Silwela abo banezinye izifo ezinganyangekiyo kunye ne-rheumatism ukuba babe namathuba angcono onyango kunye noviwo-into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube kwimidiya yoluntu ukuba usijoyine kumlo wokuphucula ubomi bemihla ngemihla kumawakawaka abantu.
Eli nqaku liza kukubonisa imithambo emihlanu yokuthambisa kwabo bane-fibromyalgia- enokuthi yenziwe ngokukhuselekileyo yonke imihla. Ngaphantsi kwinqaku, unokufunda izimvo zabanye abafundi, kunye nokubukela ividiyo yeentshukumo zokunyakaza.
Apha ungabona ividiyo ngokwayo yokuziqhelanisa nokuhamba kwesihlanu esihambahamba kweli nqaku. Unokufunda inkcazo eneenkcukacha malunga nendlela yokwenza umthambo kumanqanaba 1 ukuya ku-5 apha ngezantsi.
Ingcebiso: Abantu abaninzi abane-fibromyalgia bacinga ukuba kulungile kakhulu ukusebenzisa iibhendi zomthambo (ezinje nge la kuboniswe ngezantsi okanye i-miniband) kuqeqesho lwabo. Kungenxa yokuba kuyanceda ukufumana iintshukumo ezilungileyo nezilawulwayo.
Apha ubona ingqokelela yokwahluka Iitram zoqeqesho (ikhonkco livula kwiwindow entsha) enokuthi ilunge kuwe nge-fibromyalgia okanye wena ofumana umthambo oqhelekileyo unzima ngenxa yemeko yakho yentlungu.
1. Ukujikeleziswa kwe-Hip yokujikeleza umhlaba
Olu luqeqesho olukhuselekileyo olufanele wonke umntu. Ukuzivocavoca yindlela elungileyo kwaye ithambile yokugcina umva ongezantsi, okhalweni kunye ne-pelvis ihamba.
Ngokwenza lo msebenzi imihla ngemihla unokuba negalelo ekungqineni ngakumbi kwee-tendon kunye ne-ligaments. Umsebenzi wokunyakaza unokukhuthaza ukutshintshiselana ngakumbi kolwelo ngokudibeneyo- oko ke kunceda "ukuthambisa" amalungu. Ukulala ngokujikeleza kwe-hip kungenziwa amaxesha ngamaxesha ngemini- ngakumbi kwiintsuku xa uvuka ngokuqina emqolo kunye nasesinqeni.
Lala ngomqolo wakho kwindawo ethambileyo.
Tsala imilenze yakho ngobunono kuwe.
Bamba imilenze kunye kwaye uyithobe ngobumnene ukusuka kwicala ukuya kwelinye.
Phinda umthambo izihlandlo ezi-5 ukuya kwe-10 kwicala ngalinye.
2. Ikati (ekwabizwa ngokuba yi "cat-camel")
Lo ngumthambo owaziwayo we-yoga. Ukuzivocavoca kufumana igama layo kwikati edla ngokutshiza umqolo wayo phezu kophahla ukugcina umqolo wayo uguquguquka kwaye uhamba. Lo msebenzi uya kuba nakho ukukunceda uthambise indawo yangasemva phakathi kwamagxa kunye nomva ongezantsi.
Qalisa ukuma kuwo omane kumgangatho woqeqesho.
Tyhila umva wakho uphakame uphahla xa ushukuma kancinci. Bamba imizuzwana emi-5 ukuya kweli-10.
Emva koko yehlisa umqolo wakho yonke indlela esezantsi.
Yenza intshukumo ngobumnene.
Phinda umthambo izihlandlo ezi-5-10.
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezingapheliyo ezichitha ubomi bemihla ngemihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando oluthe kratya kwizifo ezinganyangekiyo". Ngale ndlela, umntu unokwenza ukuba iimpawu ezinxulumene noku kufunyaniswa kufumaneke ngakumbi kwaye aqinisekise ukuba abantu abaninzi bathathwa ngokungathí sina - kwaye ngenxa yoko bafumana uncedo abaludingayo.
3. Yijikeleze ngasezantsi
Lo msebenzi ulungele ngokukodwa ukushukumisa iintloko zakho. Amanqindi aguqukayo ngakumbi kunye nokushukumiseka kuya kuba nefuthe elithe ngqo kwimisebenzi yakho ye-pelvic kunye nokuhamba kwakho ngasemva.
Uninzi lwabantu alujongeli phantsi ukuba kubaluleke kangakanani ukuhamba kwe-hip. Ngaba ukhe wacinga ukuba iziqatha ezomeleleyo zingayitshintsha yonke into yakho? Ukuba i-gait yakho iguqulwe ngokungalunganga, oku kungakhokelela ekuqineni kakhulu ngasemva kunye neengxaki ze-pelvic.
Kuba kubalulekile ukukhumbula ukuba kukuhamba kunye nomsebenzi wobomi bemihla ngemihla obangela ukujikeleza kwegazi okuphezulu kwimisipha yezilonda, imisipha kunye namalungu aqinile. Izondlo ezisebenza njengezixhobo zokwakha nokulungisa izihlunu ezomeleleyo kunye nokudibana okungasebenziyo nazo zihanjiswa kumjelo wegazi.
Tsala kancinci umlenze omnye esifubeni sakho kwaye usonge iingalo zakho emlenzeni wakho.
Bamba isikhundla kwimizuzwana emi-5 ukuya kweli-10.
Ngenyusa umlenze ngononophelo kwaye uphakamise omnye umlenze uphakamise.
Phinda umthambo izihlandlo ezili-10 kwicala ngalinye.
Sithanda kakhulu uqeqesho kwi-echibi lamanzi ashushu njengendlela yokuzilolonga kwizigulana ezinezigulo. Lo msebenzi wokuthambisa emanzini ashushu uhlala usenza lula ukuba eli qela labaguli lithathe inxaxheba ekuzilolongeni.
4. UkuShukumiseka ngasemva kwiSide Bearing
Abo bane-fibromyalgia bahlala benentlungu ngasemva kunye nendawo ye-pelvic. Yiyo loo nto lo msebenzi ubaluleke kangaka ekukhululeni iifeni zemisipha yangemva kunye nokukhuthaza ukunyuka kokubuyela umva.
Lala ecaleni lekiti yoqeqesho enomlenze ongaphezulu osongelwe kwelinye.
Zitsale iingalo zakho phambi kwakho.
Emva koko vumela ingalo enye ijikeleze ngapha nangapha ngaphaya kwakho - ukuze ujikeleze umqolo wakho.
Umthambo unokuphindwa izihlandlo ezininzi ngosuku.
5. ulwandiso lwangasemva (i-Cobra)
Umsebenzi wesihlanu nowokugqibela ukwabizwa ngokuba yi-cobra -Ngenxa yenyoka ye-cobra ekwazi ukuzolula kunye nokuma ubude ukuba izoyikiswa. Ukuzivocavoca kukhuthaza ukwanda kokujikeleza kumqolo osezantsi kunye nesinqe.
Lala ngesisu sakho kwi mat yoqeqesho.
Xhasa iingalo kwaye uphakamise umzimba ngentloko.
Bamba isikhundla kangangemizuzwana eli-10.
Yiyeke ngononophelo phantsi kwakhona.
Khumbula ukwenza umthambo ngobunono.
Phinda umthambo ngaphezulu kokuphindaphinda kwama-5 ukuya kweli-10.
Le vidiyo ingezantsi ibonisa umzekelo wokuziqhelanisa nonyango lwamayeza esinqeni. Njengoko ubona, ezi ndlela zokuzilolonga nazo zithambile kwaye zilungile.
IVIDEO: Ukuzivocavoca oku-7 ngokuchasene ne-Osteoarthritis kwi-Hip (Cofa apha ngezantsi ukuqala ividiyo)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fem-bevegelighetsøvelser-for-de-med-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-02-14 18:43:102021-03-24 13:26:23Ukuziqhelanisa neentshukumo ezi-5 kwabo bane-Fibromyalgia
Iimpawu ezi-9 zokuqala zeMetabolism ephantsi 6 Ukuzivocavoca ngokuchasene ne-Osteoarthritis yeBala